Cilmaaniyadda iyo Caalamka. Q.2-ad W/Q: Cali Cabdi Coomay | FooreNews
Home wararka Cilmaaniyadda iyo Caalamka. Q.2-ad W/Q: Cali Cabdi Coomay
Cilmaaniyadda iyo Caalamka. Q.2-ad W/Q: Cali Cabdi Coomay
Cilmaaniyadda iyo Islaamka
Markii lagu guulaystay inay cilmaaniyadu tirtirtay diintii Masiixiga iyo diintii Yuhuudda, waxa loo guntay sidii loo tirtiri lahaa diinta Islaamka amaba loog dhigi lahaa mid maga ahaan keligeed u taagan. Ragga hogaank u haya dalalka reer Galbeedka oo ku tiirsan muruqa Maraykanka, Ruushka iyo maskaxda Ingiriiska waxa ay isku raacsan yihiin in aan la arkin dal, degmo, gobol iyo tuulo lagu maamulayo shareecada islaamka. Laba arrimood ayey cuskan tahay damaca reer Galbeedku ku doonayaan in ay diinta islaamka uga dhigaan sidii diimhii Kiristaanka iyo Yuhuudda. Arrimaasi waxa ay cuskan yihiin laba aragtiyood oo kala ah:
•	Marka hore waxa ay diinta islaamka uga soo horjeedaan caaqiido ahaan, oo maaha diint ay rumaysan yihiin. Waxa kale oo ay ka cabsi qabaan inay diint islaamka soo gasho dalalka ay ka hirgeliyeen cilmaaniyadda oo ay ka horyimaadaan bulshadii ay xoolaha ka dhigteen, halkaasina ay ku fashilanto nidaamkii cilmaaniyaddu ee hore uga soo takhalustay diimahoodii.
•	Marka labaad waxa y si weyn uga cabsi qabaan inay ku soo laba kacleeyaan Baaderiyadii sida dhabta ah u rumaysanaa diinta Kiristaanka oo xukunkii dawladaha dib ugu soo noqadaan. Inkastoo Kiniisadihiila gaadhsiiyey meel aanay ka soo waaqsan Karin.
Halgan dheer oo loo galay burburinta shareecada islaamka, sannadihii 1876-kii reer Galbeedku waxa ay meel mariyeen distoor cilmaaniyad ku salaysan in lagu bedelo distoorkii shareecada ku salaysnaa oo lagaga dhaqmi jiray dalka Turkiga sida ku cad buugga la yidhaa” How Khilaaf was destroyed” ee uu qoray Abdulqadeen. Gaaladu waxa ay ku guulaysteen inay afgembiyaan xukunkii khilaafad ee muslimiintu hogaamin jirtay, isla markaana taariikhdu markay ahayd 29/10/1923-kii waxa ay xoog ku meel mariyeen Mustafe Kamaal inuu si jujuub ah kula wareego maamulka Turkiga, oo loo bedelay Jamhuuriyadda ku dhaqanta nidaamka cilmaaniyga.
Markii la dhalanrogay bulshada Turkiga, caasimadii muslimiinta ee la odhan jiray ISLAMBUL, magaceedii waxa loo bedelay ISTANBUL. Si tartiibtartiib ah ayaa taariikhdii iyo xadaaradii islaamka looga dhigay waxa la burburiyey iyo waxa la bedelay. Labadii qarine ee la soo dhaaftay reer Galbeedku waxa ay ku hawlanaayeen sidii dalalku muslimiinta looga taabbageli lahaa nidaamka cilmaaniyadda ee ka hirgelay dalalka reer Yurub iyo Ameerika.
Marka si kooban loo sharaxo nidaamka cilmaaniyadda waa diin la’aan loogu talogalay in dadka sida xoolaha laga dhigo. Dedaal dheer ka dib Gaalo waxa ay ku guulaystay inay madaxda muslimiinta ka dhaadhiciyaan inay diinta Islaamku la jaanqaadi Karin waaga cusub” News Era” sababta Gaaladu guushaasi u gaadhayna waa tafaraaruqa musliimiinta adduunka la degay sebenka oo dhammaantood ka dhigay inay Gaaladu wax kasta u yeedhiso. Dhegaha muslimiinta waxa laga dhaadhiciyey dhalanteed mashruuc muslimiinta lagu kala qaybiyey. Kii Gaalada la socda waxa ay u bixiyeen wadaad qunyar socod ah” Moderate Muslim” oo nuxurkiisu yahay inuu diinta islaamka magaca ahaan u haysto, balse aanu ku dhaqmin. Markaa qunyar socodku waa Gaal la socod. Kii diinta islaamka si dhab ah u haystana waxa ay ku shaabadeeyaan “Terrorist” argagixiso waanay colaadiyaan.
Mashruucaaasi ugu horayn waxa laga hirgeliyey dalka Turkiga. Waxa la jideeyey in Qur’aanka lagu akhriyo farta laatiinka, salaadda jimacahana lagu akhriyo luuqada Turkiga. Gadhka waa la xiirayaa, shaarubahana waa al miiqayaa, tusbaxana gacanta bidix ayaa lagu wardinayaa,oo midigta looma ogola. Haddii la weydiiyo sababta waxa ay odhanayaan waxa aanu nahay “Moderate Mulsim”.
Bishii october 1973 ayaa Dalka Turkigu si toos ah u tuuray khilaafadii Islaamka, sannad ka dibna waxa uu farah ka qaaday isku xukunka shareecada islaamka, waxaana u dalka ku soo rogay qawaaniin cusub oo ay ka mid ahaayeen :
In aan dhawr dumar ah la guursan karin
Waxa uu simay ragga iyo dumarka dhinaca dhaxalka.
Waxa uu dumarka ku qasbay in ay tuuraan xijaabka oo ay xidhaan toobab IWM
In Quraanka lagu akhriyo af Turki
Waxa loo diiday in af carabi lagu eedaamo ama lagu ducaysto.
Cilmaaniyadu markii ay soo dhex gashaya dawlado badan oo islaam ahi waxa ay ka leexisay hanaankii wanaagsanaa ee ay maamulayeen dadkooda iyo dalkooda. Dawladahaasina waxa ugu darnaa dawladii Cusmaaniyiinta ama dalka Turkiga oo ay Cilmaaniyadu muddooyinkii danbe si ba’an ay bulshada dhexdeeda ugu fiday, dhaqdhaqaaqyada cilmaaniyadu waxa ay ka bilawdeen dalka Turkiga qarnigii 18aad wakhtigaasi oo uu maamulayey Suldaan Maxamuudkii 2aad waxa uu sameeyey ciidamo cusub iyo dhamaan maamulkii oo uu ka dhigay mid cusub, shaqaalaha iyo ciidamadana waxa uu ku amray in la xidho dirays iyo in gadhka la xiiro.
Sidoo kale mashruucaasi wuxuu soo gaadhay dalalka waqooyiga Afrika. Wuxuu markiiba ka hirgalay dalalka Tuunsiya iyo Marooko. Dhakhtarka (Cisbitaalka) ugu weyn dunida ee lagu sameeyo qalliinka lagu beddelo xubnaha taranka ragga “Trans-Sexual” iyo naasaha loo sameeyo ragga jidhkooda loona beddelo haween wuxuu ku yaalaa dalka Marookao.
Dhinaca Soomaalida markaad eegto mashruucaasi waa la tijaabiyey horaantii sannadkii 1888-kii dadkii la shaqayn jiray Ingiriiska iyo Talyaaniga gaar ahaan Ragga loo qoranayo waxa la odhan jiray xidha surwaal gaaban, waa si aanay salaadda u tukan, sidoo kale waxa la odhan jiray iska xiira gadhka shaarubahan deysata. Waxa kale oo loo jeedin jiray in qofkii iska daaya salaadda la siin doono mushahar dheeraad ah. Dhinaca dumarka waxa si hoose loogu sheegi jiray inay xidhaan dhar gaagaaban, oo ay ilbaxnimo ku jirto in la xidho, balse muu sii shaqan mashruucaasi, waanu xidhmay.
How Khilafah was destroyed…….Abdulqadeen Zalloom.
Taangiga Tigeerga…………………Cabdiqadir Aroma
Previous PostWasiir Maxamed Biixi Oo Shalay Muujiyay Cududiisa Hogaaminta Musharaxiinta Kulmiye,Wanqarkii Reer Hargeysa Oo Soo Dhaweeyay Iyo Sadaashii Ku Ladhnayd. Next PostXasan Guure Oo Ka Hadlay Loolanka Kulmiye Iyo Weerarkii Badhasaabka Awdal